400 oo qof oo ku geeriyooday shilalka mootada ay ku luug leeyihiin – The Voice of Northeastern Kenya
400 oo qof oo ku geeriyooday shilalka mootada ay ku luug leeyihiin
Warbixin la soo saaray ayaa sheegeysay in ilaa iyo biisha January ee sanadkan ay tirada dadka ku geeriyooday shilalka ka dhaca wadooyinka oo ay ku luug leeyihiin mootada ama dhug dhugleyda ay gaareyso 400 oo qof.
Sida ku xusan tirakoob ay sameeysay wasaarada gaadiidka iyo isku socod iyo sidoo kale waxda adeega qaran ee badbaada wadooyinka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano NTSA ayaa waxa ay shaaca ka qaaden in mootoyinka ay yihiin kuwa ugu badan ee geysta shilalka ka dhaca dalka waxana la sheegay in hawlwadeenada dhug dhugleyda ay boqolkiiba 20 ay geeystan shilalka ka dhaca dalka sanad walibo.
Xoghayaha wasaarada gadiidka iyo isku socodka Irungu Nyakera ayaa waxa u sheegay in noolasha 338 ruux oo geeriyootay la badbaadin karay haddi ay wadayaasha dhug dhugleyda ay u hoggaansami lahaayen sharciyada wadooyinka u yaala.
Xoghayaha ayaa waxa u sidoo kale sheegay in shanta sano ee la soo dhaafay ay tirada dadka ku geeriyooda shilalka mootoyinka ay ahaayen 140 balse waxa u sheegay in ay tiradaas aad kor ugu kacday iyado oo u taas u sababeeyay wadayaasha dhug dhugleyda oo aan ilaalineynin isla markaasina ku tumanaaya sharciyada wadooyinka u yaala.
Xoghayaha oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa u intaas ku daray in xeerar adag ay soo dajin doona kuwaas oo ka hortagaya shilalka mootoyinka ee si badanaayo waxana u sheegay in xerarkaas ay kamid yihiin in labo macaamil ah aysan isku marko qaadi Karin hawlwadeenada dhug dhugleyda iyo in ay soo dajin doonan nidaam lisenka ama sharciga lagu wadi karo gawaarida oo ah mid casriyeeysan.
← Qarax ka dhacay waddanka Thailand
Madaxweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo lagu wado in maalinta bari u qaliin ku maro dalka Koofur Africa →